स्टाइलिश महिला कलाई घडी 2013
स्टाइलिश महिला कलाई घडी - एक fashionista को शस्त्रागार मा सबैभन्दा आवश्यक सहायक छैन। यसको अलावा, मोबाइल फोन र ग्याजेटको पेशामा विविधतामा, कलाई घडीहरू उनीहरूको प्रासंगिकता गुमाउँछन्। तथापि, यो फैशनेबल एक फैशनेबल कुराको रूपमा विचार गर्दै, कलाई घडीहरू लोकप्रिय रहन्छन्, र नयाँ सिजनको शुरुआतको साथ, केटीहरू स्टाइलिश उपन्यासहरूसँग प्रस्तुत हुन्छन्। सुन्दर कलाई घडीको मद्दतले, तपाईं सबैभन्दा अचम्मको तस्बिरहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ, साथ साथै exquisitely परिष्कृत शैलीमा थप्न सक्नुहुन्छ।
आजको लागि सबैभन्दा अधिक स्टाइलिश महिला कंगन घडीहरू हुन्। यो मोडेल प्राय: एक लामो छाला पट्टा छ जुन बाह्य वरपरको वरिपरि लुकाउँछ, सुन्दर सजावट बनाउँदछ। प्रायः प्राय: पट्टाले स्टाइलिश लन्डन, तांबेको पातहरू, रिबन र जंजीरहरु द्वारा पूरै पुर्याएको छ। र 2013 मा, सबैभन्दा लोकप्रिय इस्पात घडी रेट्रो शैलीमा कंगन थियो।
साथै 2013 मा, फैशन डिजाइनरहरू स्टाइलिश महिला घडीहरूको मोडेललाई ठूलो डायलको साथ प्रदान गरिन्छ। यस्तो घडीहरू लामो समयसम्म लोकप्रिय हुन्छन्। तर यो सीजन, जोर दुई या अधिक डायल, यूनिसेक्स मोडेल र एक विशाल शरीर को उपस्थिति मा हो। एकै समयमा, स्टाइलिस्टले यस्ता मोडेलहरू कुनै पनि शैलीसँग संयोजन गर्न सुझाव दिन्छ। मानिसको शैली तिर पूर्वाग्रहको बावजूद यस्तो घडीहरू क्लासिक साँझको कपडाहरूसँग पूर्ण अनुमोदनमा छन्।
महिला 2013 को लागि स्टाइलिश स्पोर्ट्स घडी
निस्सन्देह, कुनै एथलीट कचरा बिना काम गर्न सक्दैन। यहां सम्म कि एक मोबाइल फोन या कुनै अन्य गैजेट संग, एक कलाई घडी खेल मा अधिक आरामदायक छ। तर, तथापि, हरेक केटीले फैशन प्रवृतिहरू पूरा गर्न चाहन्छ। यो वर्ष सबैभन्दा लोकप्रिय खेलकुद मोडेल महिलाहरु का कलाई सिलिकॉन घडी थिए। यस्ता घडीहरू अक्सर राम्रो सदमे-साधन प्रणाली छन्, र पनि पनरोक हुन्। यस सिजनमा यस्ता मोडेलहरूको विशिष्ट विशेषता एक उज्ज्वल रङ थियो।
2015 को लागि फैशनेबल सम्बन्ध
मीठा स्वामी बिक्रेता 2013
पूर्व परिपक्व नाखून 2015
टटमा टटू फूलहरू
ओक्साना मुख - शाम को कपडे 2014
वास्तविक मैनीक्योर 2015
फैशन कोट 2012-2013
फैशनेबल बाहिरी कपडा - वसन्त 2015
फैशनेबल स्कर्ट - गिर 2015
एक लुगा स्कर्ट 2014 सँग ड्रेसहरू
एडिडास - नयाँ संग्रह 2015
स्तनपान संग इन्फ्लुएंजा
Estradiol - महिलाहरु मा आदर्श
स्तनपानको बेला धूम्रपान
खतरनाक सेतोरीन खण्ड भनेको के हो?
Dracaena - संकेत र अन्धविश्वास
फ्राइड स्ट्रिङ सेम
प्राकृतिक पत्थरों संग चांदी को गहने
बच्चाहरु मा कचौरा खाँसी को उपचार
नवजात मा ओम्फललाइटिस - गर्भपात को सूजन को कारणहरु र उपचार
बिरुवा र पनीर र लसुन संग रोल
लामो कपाल संग सिधा फ्रिङ
छोराछोरीलाई राम्ररी लेख्न सिकाउन कसरी सिकाउनुहुन्छ?
बालकनीमा तह तालिका
बच्चाले लगातार पिसेलियुलीलाई किन छोड्छन्?
खेल "दौड वा मरो" तपाईंलाई एक घातक खेलको बारे जान्न आवश्यक छ